Uyisebenzisa kanjani 'Fumana i-iPhone yam' yokufumana ii-AirPods | Ndisuka mac
Uyisebenzisa kanjani 'Fumana i-iPhone yam' yokufumana ii-AirPods
Inyani yile yokuba ii-headphone ezingenazingcingo zika-Apple, ii-AirPods, zinokulahleka nangaliphi na ixesha. Ixabiso layo le-179 euro Iya kusenza sicinge ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukuba siyabakhupha okanye hayi. Kodwa, njengabasebenzisi abalungileyo, asiyi kuba ngomnye wabo bagcina izinto kwidrowa; ukuba ziyathengwa ziyasetyenziswa.
Ukuba emva kokuthatha isigqibo sokuyikhupha esitratweni, zisebenzise xa uhamba okanye uqhuba imidlalo, enye-okanye zombini- ii-AirPod ziyalahleka apha endleleni, ungakhathazeki. kuyakubakho indlela yokufumana umbulelo ku «Fumana i-iPhone yam» umsebenzi. Njengoko usazi kakuhle, lo msebenzi uluncedo kuzo zombini i-iPhone okanye i-iPad nakwii-AirPods ezintsha. Ewe kunjalo, ukuze babe nakho ukubafumana kufuneka baphume ngaphandle kwebhokisi yabo kwaye bavulwe. Ukuba ingaphakathi kwebhokisi yayo, uya kuba nakho ukwazi indawo kunye nexesha abagqibele ngalo ukuqaliswa.
Kwimeko yokuba usebenzisa iMac ukufumana ii-AirPod zakho ezilahlekileyoKuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Nxibelelana neyakho I-ID yesazisi
Vula «Fumana i-iPhone»
Cofa Zonke izixhobo, emva koko ii-AirPods zakho
Ukuba konke oku ukuko ukwenza nge-iPhone yakho okanye kwi-iPadulandelelwano ekufuneka ulwenzile lulandelayo:
Vula Fumana usetyenziso lwam lwe-iPhone
Sayina ungene nge-ID yakho ye-Apple kunye negama lokugqitha
Cinezela ii-AirPods zakho
Ke emephini uza kubona amanqaku ahlukeneyo ngee-shades ezahlukeneyo: luhlaza okwesibhakabhaka ngulo ubhekisa kwizixhobo ozisebenzisayo xa ukhangela; luhlaza yi-AirPod oyikhangelayo kwaye ivuliwe; ichaphaza elingwevu linokuba zii-AirPods ngaphakathi kwebhokisi yazo okanye ezingacinywanga.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba ukulahleka, I-AirPod enye iwile kwenye indawo kwaye enye i-AirPod kwenye. Azizukuvela zombini emephini, ke uApple ucebisa ukuba uthathe eziza kuvela kwiscreen, uzifake kwibhokisi yayo, kwaye ukhangele iyunithi yesibini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyisebenzisa kanjani 'Fumana i-iPhone yam' yokufumana ii-AirPods
Apple Watch backup, MacOS beta 2, multi-charge dock, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Umtya woKhenketho oluBini kwisikhumba esikhawulezayo seApple Bukela iHermès